Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:8aad | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:8aad
Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:8aad
FoorenewsNov 28, 2017Aragtida Dadweynaha, Barnaamijo, wararka0
Abwaannadu waxa ay ka heesaan ama midho ka tiriyaan waa waxan dadka ku dhacay iyo wax ku dhici kara oo kale oo la malo awaalay sidaa darteed dadku aadbay u jeclaadaan in ay qisooyinka haysta ama ku dhacay heeso u helaan si ay ugu laab qaboojistaan. Tusaale ahaan haddii aan hees kale kuu soo qaado Hees ku jirta Riwaayaddii Cilmi iyo Caado oo aannu wada qaadaynay fannaankii weynaa ee Cabdikhadar Xasan Laari Ilaahay ha u naxariistee oo midhaheeda ay ka mid ahaayeen ‘Hadduu reer Gabogaboobo, Gurboodkiisuna Xumaado Waxaa Gabay Aabahoode Xil Gudo Oo Garasho Yeelo’. Waxaan xasuustaa in maalmihii aan heeskaasi qaaday iyo sannadkii ugu horreeyey oo dhan mar kasta oo aan meel tago oo aan dad kula kulmo waxa ay iga codsan jireen in aan u qaado heeskaasi. Mid kasta oo hinaase hayaa haweenka ha u badnaadaane waxa ay iga codsan jireen heeskaasi. Bintiyeey haddii reer Gabogaboobo noo qaad ayay odhan jireen. Naag waliba ninkeeda ayay ku kacsan tahay markaa!. Fanku waxa uu soo maray marxalado aad u fiican oo uu nolosha saamayn ku leeyahay oo wax u sheeg iyo tusaale u yahay oo madadaalo u yahay oo daaweyn u yahay.
Marka laga hadlayo duruufaha isoo maray iyo sida xaaladdaydu noqotay markii sheekadaasi ugu horraysay igu dhacday waxa aan nasiib u helay in aan heeso badan oo aan leeyahay ku soo saaro oo ay ku soo baxaan qisadaasi kuwaasi ayaan isku daaweeyey oo aan nabarrada ku dhayay balse marka laga hadlayo heesaha iga horreeyey ee kale ee fannaaniinta Soomaaliyeed qaadaan waxaan aad uga heli jiray kuwa ay qaaddo fannaanadda caanka ah ee Khadra Daahir Cige. Duruufaha heesahayga iyo kuwo badan oo ay Khadra Daahir qaaddo ayaan is odhanaysaa malaha way isku yar dhawaayeen. Kuwaasi ayaan aad u dhagaysan jiray oo aan iska qaadi jiray. Khadra Daahir xoog bay u cabaadi jirtay! (Qosol Gaaban), waayo waxa ay u qaylinaysay wax ka yaabin jiray ayay aragtay saw maaha?. Waxaan aad u jecelahay heeso badan oo calaacal ah oo ay qaadday Khadra Daahir. Anna sidoo kale wax iga yaabshay ayaan arkay. “Bishuu Galab ay tahay Saddex Tirada Guud, Gogoshuu Fadhiyey, Ruuxii Ka Guday, Way Soo Gabtaa, Ganka iyo Gaddaa Midna gaadhi waa, Sow inuu gadaal laba Gebi dhexdood gabbal ugu dam yidhi ma gorfaynin waa, ” waa hees ay qaaddo Khadra. Waxa aan odhan jiray Alla gabadhan waxa ku dhacay waynaa!!. Heestaa waxaan dhagaysan jiray anoon fanka soo galin. Heesaha ay qaaddo Khadra Daahir ma wax loo dhigaa jira. Heestaasi marka aan dhagaysto ee aan la qaado waxaan is odhan jiray armay tan oo kale kugu dhacdaa. Mise waaba ta igu dhici doonta ee ii dambaysay. Marka waxaad mooddaa aniga iyo walaashay Khadra Daahir, Alle Ha U Naxariistee wariyaheennii Axmed Xasan Cawke ayaa isaga oo Idaacadda ku jira yaaa hoos aan leeyahay soo saaray oo aan cabaadayo, haddana mid kale ayuu saaraa oo aan cabaadayo oo calaacalayo markaasuu yidhi aar Gabdhahani wax ka yaabshay arkeen!! Ilaahow kuu naxariiso. Heesaha aan qaadaa waxa ay u badan yihiin calaacal. Sababtuna waa aniga oo la kulmay qisadaasi iga calaacalisay ee ma aha wax aan iska qaaday uun. Nuxurka waxa heesaha u sameeya qisada ay ku fadhiyaan waliba marka qof ay ku dhacday qaadaysana waxa ay leeyihiin saamayn gaar ah iyo dhadhan gaar ah.
Previous PostKuma Raacin In Aan Mansab Iyo Maaliyad Ka Helo Muuse Biixi Cabdi - Wariye Ridwaan Caydiid Ismaaciil (Akiid) Next PostHal Xidhaalayaasha Horyaala Madaxweynaha Cusub Muuse Biixi Cabdi Iyo Dooda Bulshada Ee Ku Saabsan Waxa Uu Ka Yeelayo Wasiirada Aan Xilka Ka Degin Intii Uu Siilaanyo Hogaanka Dalka Hayay.